स्थानीय तहमा एक जना मतदाताका भागमा कति पर्याे खर्च ? – Nepal Journal
स्थानीय तहमा एक जना मतदाताका भागमा कति पर्याे खर्च ?
Posted By: Nepal Journal December 11, 2017 | २५ मंसिर २०७४, सोमबार १६:२१
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४९५ रुपैयाँ २५ पैसा समग्रमा खर्च/लागत रहेको पाइएको छ । उक्त निर्वाचनमा रु छ अर्ब ९६ करोड ९३ लाख ७६ हजार ८६६ खर्च भएको निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई रु आठ अर्ब ७८ करोड, ४९ लाख ७२ हजार १६८ उपलब्ध गराएकामा प्राप्त बजेटमध्ये ७९.३३ प्रति खर्च भएको आयोगबाट उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी जम्मा रु छ अर्ब ३० करोड ३९ लाख नौ हजार ५३८ तथा तेस्रो चरणमा रु ९३ करोड ८९ लाख ७७ हजार ३२८ जम्मा खर्च भएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च लागत ५२८ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको थियो भने तेस्रो चरणमा त्यो घटेर ३५२.३४ रहेको आयोगको तथ्याङ्कबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड १४ लाख सात हजार ४७४ तथा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा २६ लाख ६४ हजार ९५० मतदाता संख्या कायम रहेको थियो ।
किन चलायाे प्रहरीले मतदान केन्द्रमा गाेली ?
समाचार, स्थानीय तहकाे निर्वाचनः २०७३ (लाइभ अपडेट)
पानीले छेकेन मतादाताको उत्साह (केही दृष्यहरु)
कतिखेर सुरु होला मतगणना ? मतगणना गर्दा माेबाइल फोन बन्द !
Be the first to comment on "स्थानीय तहमा एक जना मतदाताका भागमा कति पर्याे खर्च ?"